June 28, 2020 - PARIJATMEDIA
Jun282020 by adminNo Comments
काठमाडौं । समयसमयमा चर्चामा आइरहने महिला अधिकारकर्मी सावित्री सुवेदी चर्चामा। यो भन्दा पहिले पनि विभिन्न ब’यानका कारण चर्चामा आएकी उनी त्यसरी नै भाइरल। उनले एक अन्तर वार्तामा आफु बाबु विनाको आमा बन्न चाहेको उल्लेख गरेकी छिन् । आफु अहिले तीस वर्षको भएको भन्दै अबको पाँच वर्ष पछि कुनै पुरुषसँ गयौ न स’म्पर्क गरेर बच्चा जन्माउने योजना रहेको बताएकी हुन् । उनले पुरुषलाई भाडामा लिएर आमा बन्न लागेको विषय अहिले चर्चामा आएको छ । विशेष गरेर पश्चिमा देशहरुमा चर्चामा रहेको सिं’गल मदर नेपालमा पनि आफुले सुरु गर्न लागेको जनाएकी छिन् । यसमा कुनै पनि महिलाले आफुले चाहेको पुरुषसँग केही रकम दिएरयौ ,न सम्पर्क राख्ने गर्छन तर त्यो युवक त्यो बच्चाको बुवा भने हुँदैन । अहिले महिलाहरुले पनि पुरुषका लागि सन्तान जन्माउने गरेका घ’टनाहरु समयसमयमा चर्चामा आउँने गर्दछन् । यो पनि पढ्नुहोस: आन्टी भएर हराउन्न, न
क्वारेन्टिनमै यौ’नलिला चलेपछि…
कोरोना भाइरसको संक्रमणको समयमा विश्वभरका धेरै देशहरूले क्वारेन्टिनमा राख्दै आएका छन् । यसै क्रममा एउटा रोचक घटना सार्वजनिक भएको छ । युगाण्डा सरकारले को रोना संक्रमितलाई राखिएको क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरुले त्यहीँ यौ’नलीला सुरु गरेपछि सरकारले उनिहरुको गतिविधिमाथि निगरानी गर्न सुरक्षाकर्मी नै खटाउनु परेको छ । युगाण्डाको स्वास्थ मन्त्रालयले सरकारी क्वारेन्टिनमा राखिएकाहरुले एक अर्कासँग शारी रिक सम्बन्ध राख्ने कार्यले को रोना नियन्त्रणमा ठूलो चुनौती थपेको टिप्पणी गरेको छ । युगाण्डा सरकारका स्वास्थ सचीव डियाना अटविनेका अनुसार नागरिकको यस्तो हर्कतले कोरोना भाइरस रोक्ने सबै प्रयास खेर जानसक्ने चिन्ता ब्यक्त गरे । स्वास्थ सचीव डियानाका अनुसार क्वारेन्टिनमा राखिएका कोरोना संदिग्धहरुले आफ्ना पार्टनरसँग नभई सोही सेन्टरमा भेटिने अपरिचित विपरीत लि’ङ्गीसँग यौ’नलीला सुरु गर्नुले चुनौती थपेको ‘द गार्ज
दुलाहा’सहित १५ जनामा देखि’यो कोरोना संक्रमण।
भारतको राजस्थानस्थित भीलवाडामा एक वैवाहिक समारोहमा प्रतिबन्धका बाबजुद २५० जनालाई बोलाउनु दुलाहाका लागि महंगो पर्‍यो। विवाहमा आएका १५ जनामा कोरोना संक्रमण देखियो। यसमा दुलाहा र उनका पिता पनि संक्रमित भएका छन्। कोरोनाका कारण दुलाहाका हजुरबुवाको निधन नै भयो। संक्रमित सबैलाई अस्पताल भर्ना गरिएको राजस्थान सरकारले जनाएको छ। जन्ती गएका १२७ जनालाई क्वारेन्टाइनमा राखिएको छ। उनीहरुको क्वारेन्टाइन र उपचार खर्च दुलाहाका पिताबाट असुल गरिने निर्णय राज्य सरकारले गरेको छ। सरकारी खर्चअनुसार क्वारेन्टाइनमा रहेका १२७ जनाको खर्च हालसम्म ६ लाख २६ हजार ६ सय आएको छ। भीलवाडाका जिल्ला मजिस्ट्रेट राजेन्द्र भट्टले नोटिस जारी गरेर तहसीलदारलाई दुलाहाका पिताबाट ३ दिनभित्र रकम असुली गरेर मुख्यमन्त्री राहत कोषमा जम्मा गर्न निर्देशन दिएका छन्। मजिस्ट्रेटले उपचारका क्रममा अब आउने खर्च पनि जरिवानास्वरुप दुलाहा प
छोराले मा’त्रै गर्नुपर्ने मान्यतालाइ तो’ड्दै, आमाको कि’रिया आफै गर्दै छिन यी १६ बर्षिय किशोरी !
लेटाङ / मोरङको लेटाङ नगरपालिका २ धोवीकी १६ वर्षिय एक किशोरीले छोराले मात्र आमाबाबुको का’जकि’रिया गर्छन भन्ने मान्यतालाई तो’डदै ७ दिन अघिदेखि आफनो आमाको का’जकि’रिया गरिरहेकी छिन । १६ वर्षिय रोजिना मल्ल ठकुरीले आफनो आमा मुगाकुमारी मल्लको नि’धन पश्चात का’जकि’रिया गर्दै आएकी हुन् । आफू एक्लो सन्तान भएको र छोरा नभए पनि केही फरक नपर्ने भन्दै सेतो वस्त्र लगाएर छोरा सरह कोरामा बस्दै आएकी हुन् शो’काकू’ल मल्ल परिवारले जनाएको छ । २०७७ असार ३ गते आमाको नि’धन पछि कोरामा को बस्ने भनेर धेरै सल्लाह भयो । छोरा नभएका कारण वृ’द्धावस्थाका रो’गी बाबुले नै गर्नुपर्छ भनेर धेरैले द’बाब दिदै गर्दा आमाको का’जकि’रिया ससुरा बुबालाई गर्न लगाउनु भन्दा आफू नै बस्न उचित ठानेर छोरीले नै कोरामा बस्ने निर्णय गरेपछि उनले का’जकि’रिया गर्दै आएकी हुन् । २०७७ असार ३ गते आमाको नि’धन पछि कोरामा को बस्ने भनेर धेरै सल्लाह भ
पशुपतिनाथको दर्शन गर्दै भोलि सोमबारको राशिफल पढ्नुहोस
२०७७ साल आषाढशुक्लपक्ष असार १५ गते सोमवार नवमी तिथि हस्ता नक्षत्र चन्द्रमा कन्या राशिमा ६ वजे पछि तुला रशिमा । मेष : साझेदारी काम बाट राम्रो उपलव्धी हुनेछ तथा नयाँ कामको अवसर प्राप्त हुन सक्छ । दाम्पत्यजीवनको पूर्ण सुख आनन्न प्राप्त हुनेछ, व्यवसायवाट लाभ प्राप्त हुने देखिन्छ । वृषः शत्रु वूद्धि हुनुका साथै गरेको काममा समस्या देखा पर्ने छ । स्वास्थ्यमा पनि सामान्य समस्या हुनेछ । सामान्य कोसिसमा पनि ऋण बाट छुटकारा भने पाउन सकिन्छ । मिथुनः सन्तान सुख पाउने योग छ । तपाइको वुद्धिको प्रसंशा राम्रो हुनेछ । तथा नयाँ काम पाउनुका साथै गरेको काममा सफलता हातपर्ने छ । पैसा सापटी दिन बाट भने जोगिनु होला । कर्कटः घर परिवारमा कुरा नमिल्ने कारणले गदौ मन दुःखीत हुनेछ । आमाको स्वस्थ्यमा भने सामान्य समस्या देखा पर्ने छ । अचल सम्पत्तीको भने सुख प्राप्त गर्नु हुनेछ । सिंह : पराक्रम बढ्नुका साथै ग
रहेनन् मोडल तथा पत्रका’र कृष्ण बाबु! CCTV बाट देखिएको दृश्य यस्तो छ… (भिडियो सहित)
काठमान्डौ , रुपन्देहीका पत्रकार कृष्णबाबु पाण्डेको सवारी दु’र्घटनामा परि नि’धन भएको छ। रुपन्देहीमा रही न्युज २४ टेलिभिजनमा रिपोर्टिङ गर्दै आएका पाण्डेको शनिबार राति आफैले चलाएको कार दु’र्घटनामा परि ज्यान गएको हो । मध्यराति बुटवलदेखि आफ्नो घर तिलोत्तमाको ड्’राइभरटोलतर्फ जाँदैगर्दा बा ७ च ६९५९ नम्बरको कार दु’र्घटनामा परेको प्रदेश ५ ट्राफिक प्रहरी कार्यालय बुटवलले जनाएको छ। उक्त कारले सिद्धार्थ राजमार्गको बुटवल-भैरहवा सडक खण्डको तिलोत्तमा-१ ड्राइभर टोलमा ६ लेन सडक छेउमा राखिएको रेलिङमा ठ’क्कर खाएको थियो। कार दु’र्घटनामा परी ग’म्भीर घा’इते उनलाई बुटवलको चौराहा अस्पतालमा उपचारका लागि लगिए भएपनि राति १ बजेको करिब मृ’त्यु भएको हो। ३० वर्षिय पाण्डेको श’वलाई पो’ष्टमार्टमका लागि अहिले लुम्बिनी प्रादेशिक अस्पतालमा लगिएको प्रहरीले जनाएको छ ।स्याङ्जाको कालीगण्डकी गाउँपालिका बि’र्घा स्थायी घर भ
हेटौडामा-निस्कियो हजारौं महिलाको जुलुस सुस्मिता घटनामा उठ्यो यस्तो शंका-(भिडियो हेर्नुस्)
हेटौडा । हेटौडा भएको सुस्मिता थापाको निधनको घटनालाई लिएर अहिले सामाजिक सञ्जाल र समाचारमा निकै चर्चा भएको छ । विवाह गरेको केही महिनामै श्रीमान गुमाएकी २२ वर्षकी सुस्मिताको ह त्या भएको भन्दै परिवारका सदस्यले प्रहरीमा उजुरी दिएका छन् । सुस्मिताको उनकै ससुरा, नन्द लगायतले ज्यान लिएको भन्दै माइती पक्षले किटानी जाहेरी दिए पछि प्रहरीले पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । विवाह गरेको केही महिनामा श्रीमानको दुर्घटनामा परि निधन भएको थियो । उनले करिब एक करोड रुपैया बराबरको विमा गरेको र सोही रकमका कारण सुस्मिताको ज्यान लिइएको आशंका गरिएको छ । प्रहरीले ससुरा र नन्दलाई पक्राउ गरी अनुसन्धान सुरु गरेको छ । तर सुस्मिताको माइती पक्षले भने घटनामा अरुको पनि संलग्नता भएको भन्दै अनुसन्धानको दायरा फराकिलो बनाउन माग गरेका छन् । सोही घटनालाई लिएर लकडाउनकै बीच हेटौडामा महिलाहरुले प्रदर्शन गरेका छन्
खुसीको खबर : अन्तत सार्वजनिक सवारी साधन सञ्चालन हुने भयाे
लामो समय देखिको लकडाउनका कारण आफुहरुको लगानी डुबेको भन्दै गुनासो गरेका सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीलाई पनि राहत मिल्ने भएको छ । सरकारले सार्वजनिक यातायात सञ्चालनको तयारी गरेपछि उनीहरुले पनि राहत पाउने भएका छन् । ठूलो लगानी थन्क्याएर बस्नुपर्दा बैंकको ऋण तिर्न नसक्ने अवस्थामा पुगेको सार्वजनिक यातायात ब्यवसायीले बताएका छन् । उनीहरुको यस्तो गुनासो पछि यातायात व्यवस्था विभागले नयाँ निर्देशिका बनाएर अब सञ्चालनको तयारी गरेको हो । भौतिक पूर्वाधार तथा यातायात मन्त्रालय, यातायात व्यवसायी र मजदुरसँग निर्देशिकाबारे छलफल गरेर छिटै टुङ्गो लगाउने विभागका महानिर्देशक गोगन हमालले जानकारी दिएका छन् ।तर कोरोना भाइरस सङ्क्रमितको संख्या दिनदिनै बढिरहेका बेला चालक र सहचालकको स्वास्थ्य सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा भने छलफल जारी छ । साथै सार्वजनिक यातायातमा यात्रा गर्ने यात्रुको पनि स्वास्थ्य सुरक्षाको बा
कुनै राजमहल भन्दा कम छैन मनिषा कोइरालाको घर [भिडियोसहित]
नेपालमा जन्मेर बलिउडमा राज गर्ने एक मात्र नायिका हुन मनिषा कोइरला । बलिउडमा उनको अभिनय रहेको फिल्म संजुले पनि अपार सफल्ता प्राप्त गर्याे ।मनिषा को लागि फिल्म संजु निकै फाइदाजनक साबित भयो। संजुमा उनलाई नर्गिसको रोलमा निकै मन पराइएको थियो। २०१२ सालमा उनि क्यान्सरको शि कार भएकी थिइन्। तर क्यान्सरलाई उनले जितेकी छिन्। पछिल्लो समय मनिषा सामाजिक संजालमा निकै एक्टिभ छिन्। उनि सधै सुन्दर तस्विरहरु शेयर गरिरहन्छिन्। साथै उनले आफ्नो घरलाई निकै सुन्दर तरिकाले सजाएर राखेकी छिन्। उनले आफ्नो रूमको डिजाइनमा अधिकांश फुलको प्रयोग गरेकी छिन्। मनीषाको घरको सोफा र पर्दाको रंग पनि उस्तै छ।उनले आफ्नो घरमा गरिएको अधिकांश सजावटको समान विदेशबाट ल्याएकी थिइन्।
प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्ति’पछि डा बाबुराम भट्टराको प्रश्न : हटाउने उचित बेला कहि’ले त ?
काठमाडौं। समाजवादी पार्टीका संघीय परिषद् अध्यक्ष डा बाबुराम भट्टराईले नेपालको संविधानमा बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै दल बाहेक अरु कसैले ह’टाउने व्यवस्था नभएको हुँदा प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पछिल्लो अभिव्यक्ति अनुपयुक्त भएको बताएका छन्। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले आइतबार आयोजित एक कार्यक्रममा आफूलाई ह’टाउन दिल्ली र देशभित्रकै शक्ति लागिपरेको भन्ने धारणा व्यक्त गरेका थिए। ओलीको भनाईप्रति सामाजिक सञ्जाल ट्वीटरमा प्रतिक्रिया दिँदै पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराईले संविधानमै व्यवस्था नभएको कुरामा प्रधानमन्त्री ओलीले चि’न्ता लिएको बताए। ट्वीटमा उनले लेखेका छन्, ‘बहुमत प्राप्त प्रधानमन्त्रीलाई आफ्नै पार्टीले बाहेक अरूले ह’टाउन सक्ने व्यवस्था हाम्रो संविधानमा छैन, तर अहिले हटाए नक्सा छापेको करणले हुने भोलि सलहले दुख दिएको बेला हुने? पछि बाढीपहिरो आएको बेला हुने? अलिपछि दशैँ तिहार